Hanangana ho an’ny taranaka fara aman-dimby isika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Vonona. Izay no azo ilazana ny fahitana ny kandida Véronique Rajerison Nicole raha izy niditra ny QG na foibe toeran’ny lisitra izay tarihiny. Efa hitatao vovonana ny andro vao tonga ny kandida. Efa avy nitety boriborintany izy izao tonga izao araka ny fanazavana azo. Raha ny teo amin’ny foibe toerana ao Tsiadana kosa dia ny artista maro no nanafana ny olona maro tonga namely ny fanasan’ny candida. Hita tamin’ny tambazotra serasera tokoa mantsy fa niantso ny mponin’Antananarivo ny candida Véronique Rajerison tamin’ny alalan’ny tambazotra toy ny facebook izany. Artiste maro no nanafana sy nanentana ny olona hamerina ny teny hoe Fidio i Tantine Véronique na ny lisitra laharana faha-5. “Cinq cinq miaraka amin’i Tantine Véronique, fidio ho ben'ny tanàna ny numéro cinq” hoy ny artista izay nifandimby nanafana ny vahoaka ny 16 jolay maraina. Io tokoa no andro voatondro hanokafana ny fampielezan-kevitra. Marihina fa mbola vitsy ireo nisalotra ny tee-shirt misy ny sarin’ny candida tamin’ireo vahoaka tonga teo ireo. Ireo mpanolotsaina koa aza dia teo vao nametaka ny karavato mavo.
Raha nanomboka tany amin’ny sivy tany ny fanentanana dia efa ho amin’ny roa ambin’ny folo ora antoandro no nigadona ny kandida. Nialohavan’ny fiarabe feno olona ny fiara Hummer nitondra azy. Mijoro ao anaty fiara I Tantine Véronique no sady nanofahofa Tanana niditra ny foiben-toeran’ny lisitra tarihiny. Mora hita izy ao anatin’izao akanjo mainty misy sisin’ny volamena. Mampisongadina ny hatsaran-tarehiny tokoa ny loko nofidiany, mainka moa fa izy mitsiky iny. Azo antoka fa fantany izany.
Fitokanana ny QG ao Tsiadana no nanokafan’ny kandida ny fampielezan-keviny. Hira mafana no re nanakoako tao amin’ny toerana talohan’ny nahatongavany. Marihina fa raha nakipy ny maso dia saro-pantarina fa fampielezan-kevitra ao Antananarivo izany manomboka izany. Vitsy dia vitsy ny hira malefaka mampisongadina ny kanto ao Iarivo.
“Tranon’i Tantine ve ity” hoy ny fanontanian’ny olona sasany teo ampiandrasana ny fahatongavan’i Tantine Véronique. Tsisy nanana ny valiny ireo olona tonga teo, no sady tsy nivaky loha tamin’izany. Samy nahalala ny olona tao fa manana ny ampy ity candida ity mba tsy ilazana fa mpanefoefo. Trano mijoalajoala izay nampisalorana lamba manga sy mavo lokon’ny kandida. “Efa santatry ny fandresena izao loko izao” hoy ny mpanolotsaina iray amin’ireo ao anaty lisitra. Nandravaka ny rindrina koa sarin’ny candida. Lehibe ilay sary fa hita ho miafiafy miohatra amin’ny halehiben’ny rindrina misy azy. Notemerina poster koa ny tontolo manodidina. Efa mahazatra avokoa izany.
Nanandro ve i Tantine Véronique nisafidy ny loko manga sy mavo? Fantatra fa io lokon’ny kaominina ao Antananarivo Renivohitra na dia nisy aza ezaka nanampy loko teo aloha teo. Nanandro ve izy raha laharana faha-dimy no azony tsaroana tokoa fa ao amin’ny boriborintany faha-5 no misy azy. Ndeha ho lazaina fa fifandrifian-javatra avokoa izany.
Lahateny fohy no nentin’i Véronique Rajerison ho an’ireo vahoaka tonga teo niandry azy. Isan’ny olana ho an’ity kandida ity ny mandahateny. Vita izay dia nandray tanana an’ireo olona izy ary dia niroso tamin’ny fiarahana misakafo tamin’ireo olona nasainy tao amin’ity QG vaovao ity. Nisy lahateny nifandimbiasany sy ny an’ny solontenan’ny mpanolotsaina. Fa rehefa tahaka izao moa dia olona efa resy lahatra no tonga manatrika ka tsy dia nila fandresen-dahatra be loatra izany. Fa nahazo ny tehaka mirefodrefotra izay nandrasana.
Nitafa tamin’ny mpanao gazety ny tenany tao anaty efitrano. Maro ny loharanom-bola azo eritreretina ho an’Antananarivo hoy izy raha namely ny fanontaniana mikasika io loharanom-bola io izy. Isan’ny nambarany ny fanadiovana ny fitantanana fa eo koa ny resaka parking. Naverimberiny koa ny momba ny tsena. Io resaka tsena io moa dia miteraka olana goavana isaky ny boriborintany mba tsy ilazana isaky ny fokontany. Nilaza ny kandida Véronique fa hanatona ny vahoaka amin’izay izy manomboka ny 17 jolay fa tsy hitoetra eto amin’ny QG akory. Azo antoka izany fa any izy afaka mamelabelatra bebe kokoa izany rehetra mandritra ny 15 andro haharetan’ny fampielezan-kevitra.